IBentley Cadastre -Geofumadas
I-Bentley Cadastre yisicelo esikhethekileyo esakhiweyo Bentley Imephu ukusuka kuhlobo lweXM V8.9 kwaye njengoko igama layo lisitsho, yiyo loo nto; yeCadastre. Ukusebenza kwayo kufuna iBentley Imephu, kwaye yona ngokwayo ilingana nemodyuli yolondolozo lwe-cadastral.
Ingqwalasela ephambili yale sicelo kukudibanisa i-topology, ipropati ephuma kumzuzu ukuba i-geometries ingaba ngaphakathi kwisiseko sedatha. Yiyo loo nto into yomhlaba inokuthi iqonde ukuba omnye ngummelwane wayo, ukuba bayabelana ngemida, ukuba bayadlula kwaye nokuba inento ngaphakathi eyenza umngxunya.
Ngaloo Bentley akazange akhiphe inkxalabo egxekayo kwimizekelo Lemmen onyanzelisa ukugcina ukusebenzisa iisentroids (iindawo) kunye nemimandla (imida), njengoko ikwakhona kwizikhuselo zokuqala zeArcInfo. Nangona zinzulu kakhulu kwaye zitshaya kakuhle, iJografi yayingenakho ukuphatha iijometri ezintsonkothileyo ezinje ngepropathi enye kwenye, kuba yabenza isisele, isenza ukuba uhlalutyo lomhlaba lungabikho; zibizwa ngokuba ziigeometri ezintsonkothileyo kodwa zixhaphake kakhulu kwi-cadastre, kungasathethwa ke ngemifanekiso yeemaphu
Ngokwe-8.5 yenguqulo ye-Microstation, itekhnoloji eyaziwa ngokuba yi-XFM iyenziwa, apho i-xml yesakhiwo igcina idatha yeetabhile ichazwe kwischema egcinwe, kwaye ke imephu inokuba nolwazi olufuna itafile efakelweyo. Kananjalo ischema inokuqwalaselwa ukuze ibone kuphela idatha evela kwindawo yogcino lwangaphandle kwaye oku kuphela kukujongana nokuyondla, ukuyihlela okanye ukuyibona ngamehlo.
I-Bentley Cadastre yoyilo lwe-multilayer yomelele kakhulu, ikwayilelwe nokuba ikwazi ukusebenzisana kungekuphela kunye neemveliso ngaphakathi kweprojekthi ye-Bentley Map. Ixhasa ukukhula phantsi kolu nxibelelwano:
I-Oracle Spatial, i-2 kunye ne-3
ArcGIS, iindawo ezintathu
Ngokuqinisekileyo, idibene ngokupheleleyo kunye neeprojekthi ze-XFM kwiifom ze-dgn kwaye zidibanisa nakwiyiphi i-RDBMS / iDGN exhaswa yi-Microstation.
Imida ye-Microstation Geographics
Enye yezona zinto zinzima kakhulu kwi-cartridge yendawo yayikuko ukuba ukulungelelanisa imilinganiselo yezobupolisa kwakunzima. Ukongezelela, zonke izixhobo zamaseva zadliwa ngenxa yokuba iinkcazo eziphezulu zeCAD ziyanzima ukuhlalutya kwendawo okanye umbuzo olula wesiseko.
Ngenxa yolu bunzima kwi-topology kwinqanaba lesiseko, izixhobo ze uhlalutyo lwengqondo Kwimemori. Enye yezinto ezingalunganga yayikukuxinana kobungqongqo obabukhoyo kwiJografi (kwaye unayo?) Kuba ucoceko lwenzululwazi ngezobuchwephesha lwaluyimfuneko ukuyisa kwi-0.00001 kwi zengxube y candelo ukwenzela ukuba ukuphazamiseka kweziqendu okanye ukuxhomeka kwi-Publisher vpr kugcinwe ngokufanayo.
Ezi nkcukacha zazingenangqondo xa ucinga ukuba ipropathi ayifuni imilinganiselo engaphantsi kwemilimitha enye. Kwaye kuthiwani malunga nokunyaniseka phakathi kweefayile zesalathiso ... ezazifuna kungekuphela imida yokwabelana kodwa kunye neendawo okanye iijometri ezingakhange zibonwe xa kwakusenziwa umaleko wethopholoji.
I-Bentley Cadastre isebenzisa i-topology kwiintlobo ezintathu zejometri, iphatha amagama amanqaku eNode (Point), uphawu lomda (indawo evaliweyo) kunye neParcel Feature (polygon). Nangona umxholo weParcel uzalisekisiwe (ngokufana neMephu ye-AutoCAD), kuyabonakala ukuba iBentley igcina ukunyanzelisa kwayo umda weBoundary / node, ukongeza iBoundary / ileyibhile ukhetho, ngoku olunamandla ngokubhekisele kwijometri emele yona. Oku kugxininisa kunokuqatshelwa kwizixhobo ezigcina ulawulo lwendawo ebonakalayo kubhabho:
Isici sePhepha: Kukuzolula kuphela
Umda weMida: hambisa, ulinganise, ujikeleze, ulungelelanise iigges, uhambelane, uhambele ukudibanisa, ukuguqula, ukwandisa, ukucoca, faka i-vertex, susa i-vertex, i-fillet, iqhosha
Isici seNode: hambisa, ulinganise, ujikeleze, ulungelelanise iimilo, uhambelane, hambisa ukudibanisa
Ngenxa yoko olukhoyo ledatha (ekhankanywe kuphela Oracle Spatial) abeke imithetho topological ukuba akhe xa iipropati ezintsha okanye wenze ulondolozo (maintenance) izaziso angababulali ukuba ukwenza utshintsho ezichaphazelekayo okanye uhlengahlengiso inkqubo auto.
Izixhobo zokusetyenziswa kwezixhobo zokusetyenziswa kwezidumbu
Enye yeenzuzo ezilungileyo kakhulu zeBentley Cadastre yinto ejoliswe kuyo kwinto eyenzekayo kwinkqubo yokwakha, ukuphathwa kunye nokugcinwa kweefowuni kwimiba yejimethri apho kukho iifowuni ezithile ezakhiweyo.
Eneneni bengengabo izenzo ayikwazanga makwenziwe Microstation Geographics, kodwa noko sele uphunyeziwe lo technology xfm kwaye amaxesha amaninzi kwafuneka enze Project Pure Osisilumko VBA matshini.
Kwakhona kulwakhiwo lwedatha oluqhelekileyo kunye nemiyalelo yokuhlela, ubunakho be-xfm bongeziwe ukuzilungiselela ukusetyenziswa kwe-cadastre. Okokugqibela izixhobo ezihambelana ne-cogo zikunika ulwenziwo ngakumbi.
Ukudala kweengxoloZonke ezi zibandakanya uhlaziyo oluzenzekelayo le ndawo, eququzelela ibhokisi equlathe geometry iperimitha ... kucacile ukuba ungenza ngu Geospatial Administrator lunako kwakhona uvuselele ezinye iinkcukacha ezifana isaziso xa kufuneka apreyizali kuhlolwa, ukuba wena uthumele inqaku eludinini kwiLizwe Registry, umbutho ukuya ukuhamba Project Wise njl
Yakha i node
Ifayili yomsindo ogqithiseleyo
Iprojekthi umda kwi-node
Ukuthunyelwa kweepakethi ukusebenzela imigca
Yakha uphando kwiindawo
Yakha i-topology kwimigca yomsebenzi
ZidelaOku kunemisebenzi emininzi enomdla kakhulu, kubandakanya ukwahlulahlula iziqendu ezingaqhelekanga ukusuka kwisiseko, ukukwazi ukwahlulahlula zibe ngamalungu alinganayo. Unokukhangela kwakhona indawo ethile kunye nomgca wokuqhelanisa.
Iqela, kunye nale nxalenye okanye iipakheji ezininzi zingaqalwa, inkqubo inokucwangciswa ukuze ipropati entsha igcine ikona ye-cadastral yendawo ehlala kuyo okanye xa kuveliswa entsha. li>
Shintsha, oku kuluhlu lokuhambisa umda, ukugcina ingqibelelo yobungqina kwi-fly.
Ukufezekisa kulula ukufuduka
Kwisithuba esithile siza kuxubusha oku ngongqongqo, kuba ukuphunyezwa kuyinto elula njengokwakhiwa ukususela ekuqaleni kodwa ukufudukela kwiprojekthi enzima Indawo yeBentley Imephu Akufanele kube lula kakhulu ngezizathu ezifana nalezi:
-Objects kwi-Geographics banokuba nezinto ezininzi, ukuhamba kwi-Bentley Imephu kuya kufuna ukuhlukanisa ezo zinto zibe zizinto ezahlukileyo kunye nokudala imithetho ye-intellectual integrity.
-Izinto ezigqithiseleyo zixhaphaza iifayile zembali ukugcina izigulo zazo apho ... kwaye ezi ziya esihogweni kuba akukho sixhobo sokubakhupha kwisiseko se-tabular.
-The izixhobo vba eyakhelwe zokusebenzisa zokusebenza: ukubhalisa iimephu, iifama ikhonkco, ukubala APC (ndawo, kwebala, ilungelelanise), nokunikezwa, uhlalutyo topological ... njl, kufuneka zilungiswe kuba yonke into benza nilizise emaqhosheni.
Ulawulo ngeProjeke yeSilumko, yayililungelo lokujonga iifayile ezikhethekileyo, ukunciphisa ubungakanani beefayile. Kule meko, lonke olo lawulo kufuneka lwakhiwe kwakhona ukudala ukufikelela kwizinto ezizezomhlaba ngamnye.
-Ukuphuhliswa kwezicelo zesicelo sokugcinwa kwe-intanethi ezithumele iJometri njengefayile ehlengahlengayo ... kungcono singaqhubeki.
Iimpembelelo zeBentley Cadastre
I-Bentley Cadastre ibonakala ngathi ihamba phambili kwimephu ye-Bentley, nangona kunjalo ngenxa yokuba beqinisekisile ukuba zombini i-XM kunye ne-V8 ziya kuba zezethutyana, uninzi lwethu belilindele umhlaba othenjisiweyo we-V8i hleze utyalomali lokufuduka luyimfuneko kabini. Sikwabona ukungancedi kokuhlala ngaphandle kweenkonzo zedatha ezamkelwa kakuhle njengePostgre, isixhobo abaninzi abasibonileyo emva kokuba ilayisensi yeOracle yeprojekthi enkulu yecadastral inokuxabisa i-30,000 yeedola ngonyaka kwiseva enye Iiprosesa ezimbini.
Amaxesha amaninzi ukuphunyezwa kwetekhnoloji ye-Bentley Systems yinto ethi iingcali zicebise ngeeprojekthi ze-cadastral kwinqanaba lelizwe okanye kwimimandla emikhulu, nangona kunjalo kunokuba yinto enomdla ukulinganisa ukuba oku kuthanda kwe-dgn okunxulunyaniswa nomhlaba kungenxa yetekhnoloji yayo enobuchule evumela ukubiza ii-orthophotos ezingaphezulu Iipropathi ezili-15 kwaye emva kwemizuzwana eli-15,000 ipeni kubhabho. Okanye ngaphandle kwalonto nayo Kweli ubeko geofumar kwi sublime ngezicelo ukuba zinamandla kodwa akusoloko njengoko indigestible ngumsebenzisi avareji, njengoko kwimeko Bentley Geospatial Umncedisi, Project Osisilumko Geoweb Umshicileli eziyimfuneko ukuphumeza Bentley Cadastre.
Ukususela kwi-2011 Bentley Cadastre Inxalenye yeBentley Imephu V8i.
Indawo: iBentley Cadastre
Oko kukuthi: kuvumela ukuphuhliswa kwezicelo kumgangatho wabaxhasi kunye neseva (intranet kunye newebhu).
Ngale ndlela, kunokwenzeka ukuhlela ulwazi lwe-vector kwi-ActiveX eyenziwa kwiwebhu, nokuba phantsi kweefayile ezibomvu okanye iinkonzo zesevisi zewebhu (WFS) kunye nokulawula kwembali.
UJuan Molinarez uthi:
Yiyiphi le malunga neziqendu ozikhankanyileyo:
"Uphuhliso lwenkxaso phantsi kolu qhagamshelwano:
»I-Oracle Spatial, i-2 kunye ne-3
»ArcGIS, iileya ezintathu”.
iinkonzo zobungcali uthi: